Isikuta sombane, uMipu yokuPhulula iMisipha, iFitness Bike - Jinbang
I-Freestyle scootering (ekwabizwa ngokuba yi-scootering, ukukhwela i-scooter, okanye ukukhwela nje) ngumdlalo ogqithileyo obandakanya ukusebenzisa i-stunt scooter ukwenza ubuqhetseba obufana nebhayisekile motocross (BMX) kunye ne-skateboarding. Ukusukela oko umdlalo waqalayo ngo-1999, ii-stunt scooter ziye zavela kakhulu. Umzekelo, inkampani ye-scooter iRazor isukile ekuveliseni kuphela iimodeli eziqhelekileyo zeRazor A kwakhona yenza izithuthuthu ezakhelweyo ngokwesiko kunye nokudibanisa ezinye iinkampani. Ngokukhula kwezemidlalo, amashishini kunye neenkqubo ziyilelwe ukuxhasa ukukhula koluntu oluhlaziyayo. Umzekelo wenkqubo yenkxaso kwangoko ziiforamu zeScooter Resource (SR), ezaye zanceda ekukhuliseni indawo ekuhlalwa kuyo ngokuqhagamshela abantu abanomdla wokufumana isithuthuthu ngo-2006. thwala ezo ndawo.
Isikuta sokukhaba ngombane ngokubanzi sigqithile kwizikuta ezenziwe ngegesi ngokuthandwa ukusukela ngo-2000 Bahlala benamavili amancinci amabini anzima, ane-chassis esongekayo, ihlala i-aluminium. Abanye abakhaba ngesithuthuthu banamavili amathathu okanye amane, okanye benziwe ngeplastikhi, okanye bakhulu, okanye abasongi. Ukusebenza okuphezulu kwee-scooter ezenzelwe abantu abadala zinamavili angaphambili amakhulu. Isikuta sokukhaba ngombane sahlukile kwii-scooter zokuhamba kuba zikwavumela ukuqhutywa komntu, kwaye azinazixhobo. Uluhlu luhluka ngokwahluka ukusuka kwi-5 ukuya kwi-50 km (3 ukuya kwi-31 mi), kwaye isantya esiphezulu sijikeleze i-30 km / h (19 mph).
Ukuphulula umpu JB8009
Ukuphulula umpu JB8008